Mamaky Blaogy ny Ayatollah Lehibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2018 14:00 GMT
Zavatra tena mahagaga no nitranga tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny vondrom-piarahamonin'ny blaogy Persiana. Nitsidika ny Ayatollah Lehibe Montazeri, izay efa mihoatra ny 80 taona, tao Qom, ilay tanàna relijiozy ao Atsimon'i Teheran i Mohammad Abtahi, filoha lefitra iraniana taloha sady blaogera mavitrika
”Manao ahoana ny blaogin'i Atoa Abtahi ao,” ho ny Ayatoll Lehibeah manontany am-pihanihaniana nandritra ny fiatoana tamin'ny fivoriana kely, nipetraka teo amin'ny seza fampianarany manokana, ambony noho ny seza mahazatra.
Araka ny lahatsoratra ao amin'ny blaogin'i Abtahi, milaza aminy ny Ayatollah avy eo fa mamaky ny blaoginy izy ary manontany azy mikasika ny mpamakiny sy ny fotoana laniany amin'izany isanandro. Toy ny maro, tezitra noho ny fanasivanana ny tranonkalany ihany koa ny Ayatollah ary manome ilay blaogera ekleziastika rohin-tranonkala vaovao tsy voasivana ho an'ny tranonkalany.
Isaky ny manana adolantsento tia mifety sy Ayatollah antitra mpanohitra manao zavatra iray mitovy ianao, tokony ho fantatrao fa zavatra malaza izany.